हामी चैं कहाँ कम छौँ र ! | PaniPhoto
हामी चैं कहाँ कम छौँ र !
पानीफोटो / December 17, 2012 /5Comments
हामी सार्वभौम जनता, त्यो पनि संक्रमणकालिन राजनीतिक अवस्थाका । हामी भन्दा शक्तिशाली र बहादुर त सायदै कोही छ । हामी सँधै ठुलो बिषयमा छलफल गर्छौं । टाढाको हेर्छौं । हामी दुरदर्शी । नेताहरुले देश बिगारे, हाम्रो गालीको बिषय । सँधै गुनासो गरिरहेका हुन्छौं अरुसँग । देशमा नियम कानुन भएन । गरिखान पाइएन । रोजगारी छैन । बिजुली छैन । पानी छैन । विकाश छैन । यसरी अल्झियो राजनीति केही निकाश छैन । हामी सँधै यस्तै बिषयमा चिया गफ गरिरहेका हुन्छौं । अझ नेतालाई गाली गर्ने कुरामा त हामी थप उदार छँदै थियौं, अब त झापड हान्नेका लागि खल्तिबाट पैसा निकाल्ने पनि भइसक्यौं । दोसल्ला ओडाउँन नपाएकोमा छुकछुक होला कतिलाई त । तर हामी बिर्सन्छौं, देश हामी नसुध्रिएसम्म कुनै पनि हालतमा सुध्रिदैन । नेताहरु हामीबिचबाटै आएका हुन् । हाम्रै बानी बेहोराको प्रतिनिधि पात्र मात्र न हुन् । सर्लक्कै हाम्रै बेहोरा बोकेका हुन्छन् । यसैले नेता सप्रिनु अगाडी हामी सप्रिनु अनिवार्य छ । तर हामीलाई ऐना हेर्ने फुर्सदै कहाँ छ र ? आउँनुहोस्, म देखाउँछु ऐना ।
आकाशेपुल हुँदाहुँदै सडकबाट बाटो काट्दै बटुवा (तस्विर: मेरोरिपोर्ट)
सडकका नियमहरु तोड्नु त हामीलाई बहादुरी जस्तो लाग्छ । आकाशेपुल प्रायः प्रयोग नै गर्दैनौं, ढिलो हुन्छ भनेर । अहिले जहाँसुकैबाट सडक पार गर्नेलाई कारवाही गर्न थाले पछि भने केही दृष्यहरु फेरिन थालेका छन् । नो पार्किङमा पार्क गर्छौ । खै त अरु ठाउँ हाम्रो प्रश्न हुन्छ । सडकमा पैदल हिड्ने ठाउँ ढाकेर पसल थाप्छौं । सडकमा साँच्चै हामी भ्रष्ट छौं ।
यो माथिको तस्विर मैले काठमाण्डौको न्युरोडमा खिचेको हुँ । फोटो खिच्दै गर्दा ट्याक्सीहरु त्यही बोर्डकै छेउमा यात्रुहरु ओराल्थे । तलको तस्विर हेर्नुहोस्
जताततै प्याच्च प्याच्च थुक्नेहरुको सँख्या पनि शहरमा कम छैन । तस्विरमा हेर्नुहोस् न, नथुक्नु है भनेर अनुरोध गरेको पत्रमा नै थुकिदिएछन्, यो अर्को बहादुरी ।
फोहोर नगरौं है भनेकै ठाम्मा फोहोर छोडेर हिड्नु त अझ ठुलो बहादुरी हो । टोलको दादाले मात्र यस्तो गर्न सक्छ, मलाई कसले जरिवाना तिराउँछ ? हामीलाई यस्तै त लाग्छ ।
यसैले हाम्रो समाज भष्ट्राचारले गाँजिएको छ । किनकी हामीले साना भनेका कुराबाटै यसको सुरुवात हुन्छ । हामी खाली ठुला तारो ताकिरहेका हुन्छौं । हामीलाई सानो कुराको के वास्ता ? अनि हामी ठाम् कुठाम् यसरी नै गाली खाईरहेका हुन्छौं, जरिवाना तिरिरहेका हुन्छौं, र नेतातिर धारे हात फर्काएर नियम कानुन बनाएनन् भन्दै सरापी रहेका हुन्छौं, हैन त ?
तस्विर साभार : आकारपोस्ट डट कम
Tags: कम, कहाँ, चै, छौँ र, हामी / Posted in: फोटो ब्लग
March 3, 2012 at 12:23 pm / Reply
निकै राम्रो। मेरो मान्यता पनि यही हो।
अगम लम्साल says:
March 3, 2012 at 12:43 pm / Reply
अबुइ हामी चै किन कम नि । हामी गणतन्त्र नेपालका सम्मानिय नागरिक । हामीलाई जे गर्न हक छ । यही गर्न त गणतन्त्र ल्याएको नि । मुर्खहरु यस्तै सोच्दा हुन् ।
March 3, 2012 at 12:44 pm / Reply
जनता अनुसारका नेता त हुन् । हामी जनता नै यस्ता छो अनि नेता कसरी राम्रा छान्नु र हुनु ?
बुद्धि भट्टराई (मलेसिया ) says:
March 3, 2012 at 12:45 pm / Reply
के यस्ता कुरामा किचकिच गर्नु भएको तपाइले । नेताहरुले देश खाइसके । कत्रा कत्रा प्लेन खाए । खोला खाए । नदि खाए । मल खाए । यति मुला हाम्रो भष्ट्राचार । यो त केही पनि होइन ।
December 18, 2012 at 6:15 pm / Reply
नेपाली को बुद्दि माथि होइन …..तल ठाउमा मा हुन्छ !